Momba anay - Ningbo Chang Liang Paper Products Co., Ltd.
Ningbo Changliang Paper Products Co., Ltd. dia miorina ao Ningbo, Zhejiang, tanàna ara-toekarena sy ara-barotra lehibe indrindra any Shina.
Tanàna ara-toekarena sy ara-barotra lehibe indrindra any Sina. Ny orinasanay dia mifantoka amin'ny famokarana sy famatsiana vokatra azo ampiasaina isan-karazany miaraka amin'ny vina tokana hitarika ny fanaterana vokatra sy serivisy avo lenta.
Ny vokatra azonay indrindra dia ahitana: taratasy fanary, zavatra azo simbaina ary vokatra ao an-tokantrano, toy ny: takelaka taratasy, kaopy taratasy, servieta, boaty taratasy, lamban-databatra, sainam-pirenena momba ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, sns., zavatra azo simbaina.
Ny orinasanay dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny fanondranana, ny tsenan'ny fanondranana anay indrindra any Etazonia, Japon, Rosia, Aostralia ary tanàna Eoropeana, Amerikana ary Azia Atsimo Atsinanana.
Ny orinasa dia mampiasa fitantanana mahia, manomboka amin'ny famokarana ka hatramin'ny fanaraha-maso ny kalitao, ny fampidirana varotra.
Manana fitaovana fanontam-pirinty mandroso izahay, ary fitaovana famokarana mandeha ho azy tanteraka. Mpitantana ara-teknika ao amin'ny orinasa: manana traikefa mihoatra ny 10 taona, mahazatra ny famokarana sy ny fizotran'ny vokatra. Ny fitaovana dia fehezina tsara, tsara ihany, fa tsy ratsy, fitaovana taratasy vita amin'ny sakafo no ampiasaina, grama ampy ampy. Manamboara vokatra vaovao ara-potoana arakaraky ny filanao sy ny tian'ny tsena. Ny mpamorona antsika manokana hikaroka sy hamolavola vokatra vaovao, afaka manamboatra lasitra vaovao ihany koa isika araka ny filan'ny mpanjifa, mba hahatratrarana ny vokatra tadiavin'ny mpanjifa azontsika tratrarina. Ny orinasa dia mifanakaiky amin'ny seranana Ningbo sy seranan-tsambo Shanghai, fitaterana mety.
Ny tanjon'ny orinasanay dia: ho an'ny mpanjifa sy ny ray aman-dreniny. Mitombo ny orinasa, ary miarahaba antsika mpanjifa rehetra hitsidika ny orinasa. Manantena izahay ny hametraka maharitra sy akaiky ny fiaraha-miasa fifandraisana amin'ny mpanjifa, ary miara-mivoatra eo amin'ny fototry ny fiaraha-miasa sy ny fandresena-fandreseny toe-javatra.